SONATA-CANTATA: မေတ္တာနှလုံး ကိုယ်စီသုံး
I copied this post for reading carefully myself. Very useful article for me because I'd like to know how to eleminate my anger or to control anger. Thanks alot.
မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာ “သတ္တ၀ါအားလုံး ချမ်းသာကြပါစေ”လို့ စိတ်မွေးတာပါပဲ။ ဒီမှာ စိတ်က “သတ္တ၀ါအားလုံး”ကို အာရုံပြုရပါတယ်။ ဒါက “အာရုံပြုမှု” အပိုင်းပါ။ “ချမ်းသာကြပါစေ”ဆိုတာကတော့ “စိတ်ထားမှု” အပိုင်းပါ။ ၅၂၈-သွယ်သော မေတ္တာပို့နည်းမှာ ဆိုရင် စိတ်ထားမှုအပိုင်းအနေနဲ့ (၁) ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ (၂) စိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေ (၃) ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ (၄) မိမိကိုယ်ကို မိမိ ကောင်းစွာ ထားနိုင်ကြပါစေ (မိမိတို့၏ ခန္ဓာဝန်ကို ကောင်းမွန်စွာ ရွက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ) လို့ စိတ်ထားရပါတယ်။ အာရုံပြုမှုအပိုင်းအနေနဲ့ သတ္တ၀ါအားလုံး အကြုံးဝင်အောင် ပုဂ္ဂိုလ် ၁၂-မျိုးကို အရပ် ဆယ်မျက်နှာဖြန့်ကျက်ပြီး မေတ္တာစိတ်ကို ပို့လွှတ်ရပါတယ်။ အကျယ်ကိုတော့ Loving Kindness … post နဲ့ ကိုအယ်လ်ဗင် (သုမေဓာ) ရဲ့ မြန်မာမူ Metta Chanting ကို နားဆင်လို့ရပါတယ်။
နေ့ တိုင်း၊ အချိန်တိုင်း လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ တွေနဲ့ လုံးလည်လိုက်နေတော့ မေတ္တာပွားဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပြန်ပြန်ပေးရတယ်… တခါတခါစိတ်ကြီးက လက်နှီးစုတ်ကြီးလိုပဲ… စိတ်အညစ်တွေလျှော်ပေးတဲ့ ဒီလိုpostလေးတွေ ဖန်တီးပေးပါဦးဆရာ….